↑ (ဧပြီ ၁၉၆၁) လက်ငင်း မွန်ပြည်နယ် ပြဿနာ. မွန်ပြည်နယ် ဖော်ထုတ်ရေး အလုပ် ညီညွတ်ရေး ကော်မတီ။
↑ (ဇူလိုင် ၁၉၅၈) လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲ အသွင်မှ ဥပဒေ အတွင်း တိုက်ပွဲ အသွင်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း အခမ်းအနားတွင် မွန်ပြည်သူ့ တပ်ဦး နိုင်အောင်ထွန်း၏ မိန့်ခွန်း (မွန်-ဗမာ). မွန်ပြည်သူ့ တပ်ဦး (ဗဟို)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နိုင်အောင်ထွန်း&oldid=458865" မှ ရယူရန်
၂၆ ဧပြီ ၂၀၁၉၊ ၁၇:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဧပြီ ၂၀၁၉၊ ၁၇:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။